Maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan Maxkamada CQS iyagoo lagu… – Hagaag.com
Maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigay saraakiil ka tirsan Maxkamada CQS iyagoo lagu…
Posted on 27 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Maamulka Puntland ayaa xabsiga dhigey saraakiil ka tirsan Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida iyagoo lagu eedeeyay in ay sii daayeen dad loo haystay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay in mas’uuliyiintan oo ka howlgalayay magaalada Gaalkacyo ay hadda ku socdaan baaritaano lagu ogaanayo sababta ay kusii daayeen dad Shababnimo ku eedeeysnaa.
Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhinaca Waqooyi ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo lagu diley qaar kamid ah maamulka gobolka Mudug ee Puntland.
Sidoo kale, Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland ayaa sheegay in ay jiraan odayaal reer Puntland ah oo ku sugan magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo amarrada ka qaata Al-Shabaab, isla markaana uu maamulku si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqa odayaashaas.
“Waxaa jiray shakhsiyaad taleefanadooda la dhegaystay oo amarrada kasoo qaata meelo kale. Dadka noocaas ah ciddii koofiyada saaratay, haddii ay ogaan lahaayeen shaqooyinka ay qabtaan xaaladdu si kale ayay noqon lahayd,” ayuu yiri wasiir Dhabancad.
Maamulka Puntland ayaa wada dadaalo lagu doonayo in loogaga hortago weerarada ay ka geystaan ururka Al-Shabaab deegaanada Puntland.